दशैँमा मासुका परिकार, के खाने, कसरी खाने ? – Hotpati Media
आज: | Wed, 03, Jun, 2020
दशैँमा मासुका परिकार, के खाने, कसरी खाने ?
१८ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:०० मा प्रकाशित (8 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
हिदु नेपालीहरुको महान् चाड दशैँ गाउँ होस् वा शहर, केटाकेटी हुन् वा वृद्धवृद्धा, धेरैलाई दशैँको रौनक छाइसकेको छ । दशैँको बेला धेरै दिनसम्म हुने विदा, मनमोहक प्राकृतिक वातावरण, आफन्तसँग समय बिताउन पाउने खुसी, आदिले धेरैको प्रतिक्षा चाड हो, दशैँ ।
परिवारका सबै सदस्यहरु भेला भएर एक आपसमा रमाइलो गर्दै मीठो मसिनो खाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी, दशैँमा धेरै घरको भान्सामा मासुका परिकारहरु पाक्छन् । अन्य समयमा भन्दा दशैँका बेला मासुलाई विभिन्न तरिकाले पकाएर फरक फरक स्वादमा खाने गरिन्छ, भुटन, तास, सेकुवा, झोल, फ्राई, आदिको रुपमा ।
हुँदा खाने र हुने खाने दुवै वर्गका भान्सामा दशैँको बेला मासु पाकेकै हुन्छ । यसरी हेर्दा, दशैँ र मासु एक आर्काका परिपुरुक हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ । त्यत्ति मात्रै होइन, दशैँ नजिकिँदै गर्दा शाकाहारी र माँसाहारी दुवैले मासुको विषयमा कम्तीमा एकपटक कुरा गरेकै हुन्छन् ।
शाकाहारीहरुले मासुको सट्टा के खाने र माँसाहारीले मासुका कस्ता कस्ता परिकारहरु खाने भनेर योजना बनाउँछन् । अन्य समयमा विभिन्न कामकाजले व्यस्त रहँदा आँफैले पकाएर मासुका धेरै परिकारहरु खाने फुर्सद नभएर दशैँलाई पुर्ण सदुपयोग गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
कतिपय अवस्थामा शाकाहारी बन्नु राम्रो र मांसाहारी नराम्रो भन्ने चिन्तन सुन्न पाइन्छ । तर यसका आफ्नै राम्रा र नराम्रा पक्ष छन् । कतिपय अवस्थामा मासुबाट राम्रो मात्रामा प्रोटिन प्राप्त हुने हुँदा शारिरिक विकासका लागि आवश्यक पनि छ ।
मासुको जाँच गरी, सफा मासु मात्र खानुपर्छ । मासुलाई चिस्याएर, थोरै तेल हाली वा उसिनेर छाकमा ३-४ टुक्रा सम्म खाँदा यसले शरिरलाई बेफाइदा गर्दैन । तर मासु खाइसकेपछि भने पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । माछा, मासु, तरकारी, फलफुलका वा आफ्नै विशेषता रहेकाले चाडबाडका बेला हरियो सागसब्जी, सलादसँगै हरेक वस्तु मात्रा मिलाएर खानु अपरिहार्य छ ।
आफ्नै घरमा खसी, बोका, राँगा, च्याँङग्रा, आदि काटेर मासु खाने गरिन्छ । विशेषगरी फुलपाती र महाअष्टमीको दिन वली दिने नाममा हजारौँ निमुखा पशुपंक्षीहरुको हत्या गरिन्छ । अनि उक्त मासु धेरै दिनसम्म विभिन्न तरिकाले पकाएर मीठो परिकारको रुपमा खाने प्रचलन छ । तर चलिआएको चलन भन्दै धेरैदिनदेखी काटेर राखेको मासु दशैँमा खानु भने स्वास्थ्यका दृष्टिले फाइदाजनक हुँदैन ।
दशैँमा मासु धेरै उपभोग गर्दा स्वास्थवर्धक छ-छैन बुझ्न आवश्यक छ । धेरै मासु खाँदा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन, कति मात्रामा मासु खानुपर्छ, आदि कुराको पनि ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ । मासुकै कारण विभिन्न जुनोटिक रोगहरु (जनावर वा पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने रोग) पनि लाग्न सक्छ । त्यसबारे पनि सचेत हुन उत्तिकै आवश्यक छ । सेतो मासु (वाइट मिट) र रातो मासु (रेड मिट) का भिन्नताका विषयमा पनि विभिन्न प्रसंग सुन्न पाइन्छ । सेतो वा रातो कुन मासुले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ, बुझेर मात्रै मासु खानुपर्छ ।
दशैँमा मासुका लागि काटिने पशुपंक्षीहरु वा काटेर तयारी अवस्थामा बेचविखनका लागि बजारमा राखिएका मासु कुन ठाउँबाट आयात गरिन्छ, त्यसको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । मासुको हाइजिन र परिक्षण सम्बन्धि थुप्रै अनुसन्धान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गरिरहेको छ ।
प्रायः दशैँमा खसीको मासु खाने गरिन्छ । खसीको मासुमा थुप्रै आवश्यक तत्व जस्तै प्रोटिन (४२ प्रतिशत), पोटासियम, आइरन, भिटामिन ए, सि, डि, बि ६, १२, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम आदि पाइन्छ । यससँगै यसमा ७ देखी १० प्रतिशत फ्याट र १९ प्रतिशत कोलेस्ट्रोल पाइन्छ ।
कुखुरा र टर्की (वाइट मिट) को मासुमा फयटको मात्रा रातो मासु भन्दा कम हुन्छ । मासु रातो र सेतो यसमा भएका मायाग्लोबिन नामक कोशिकाले निर्धारण गर्छ । सेतो मासुको तुलनामा रातो मासुमा फ्याट बढी भएसँगै यसमा प्रोटिन, भिटामिन र अन्य तत्व पनि बढि पाइन्छ ।
आफ्नो टेष्ट र प्राथमिकताका आधारमा पनि रातो वा सेतो मासुको प्रयोग हुन्छ । मासुमा रहेको कोलेस्ट्रोल र फ्याटका कारण शरिरमा कत्तिको हानी पुग्छ भन्ने कुरा मासुको मात्रा र तरिकामा निर्भर गर्दछ । हरेक छाकमा सही मात्रामा, सही तरिकाबाट पकाएर प्रयोग गर्नाले यसले शरिरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व दिन्छ ।
खानपिनमा ध्यान नदिँदा दशैँका बेला मानिसहरुमा झाडाबान्ता, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, एसिडिटी जस्ता समस्या देखा पर्छ । त्यत्ति मात्रै होइन, चाडपर्वको समयमा साथीभाई, इष्टमित्रसँग बसेर (विशेषगरी युवा) मासु सँगसँगै पेयपदार्थको सेवन गर्छन् । यसले लिभर र दिमागमा असर पु¥याउनका साथै शारिरिक तौल बढ्ने, मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर, नवजात शिशुहरुमा जन्मजात रोग र डिप्रेसन समेत हुनसक्छ । यस्ता समस्याहरुले सामाजिक समस्या तथा दुर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।
थप १ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, मृतकको संख्या ९
थप २०१ मा कोरोना संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या २३००
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमित २७८
दैलेखमा संक्रमित बढ्दै : रोकथाममा अन्योल
५ कोरोना संक्रमितको भर्ना गर्न अस्पतालले मानेन, मन्दिरको हलमा लगेर राखियो
न्यूयोर्क-अमेरिकामा प्रहरी नियन्त्रणमा एक अश्वेत वर्गका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात आन्दोलन चर्केको छ । आन्दोलन चर्के सँगै सरकारले कानुन परिमार्जनको... विस्तृतमा